သရုပ်ဆောင် ဇာဂနာ ကျန်းမာရေးကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်င - Yangon Media Group
သရုပ်ဆောင် ဇာဂနာ ကျန်းမာရေးကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်င
သရုပ်ဆောင် ဇာဂနာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ရန် နုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့မှနုတ်ထွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများထံသို့ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း နုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော့် ကျန်းမာရေးအ ခြေအနေကြောင့် အခုဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရဆဲပါ။ တကယ်လို့ ဆေးရုံကဆင်းလာရင်လည်း အလုပ်တွေကို ဘယ်အချိန်မှပြန်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျွန်တော် ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကို စောင့်နေရ တယ်။ ကျွန်တော့်ကြောင့် ရိုက်ကူးဖို့ ကြန့်ကြာနေတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ် စေချင်တဲ့အတွက် နုတ်ထွက်လာတာပါ။ တခြားသော အကြောင်း ရင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဘက်မှာ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တခြားလုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေ တောင် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာတွေ တောင်ရှိပါတယ်”ဟု ဇာဂနာက ပြောသည်။ သရုပ်ဆောင် ဇာဂနာသည် ယခုအခါတွင် သည်းခြေအိတ်တွင် ကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် ဝိတိုရိယ ဆေးရုံတွင် ၃နာရီကြာခွဲစိတ်ခံခဲ့ရ ပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ဆေးရုံတွင်သာဆက်လက် ဆေးကုသမှုခံနေရ ဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကြောင့် ‘နော်ပဲလှော်’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးရန်အတွက်ကိုလည်း နောက်ရွှေ့ဆိုင်းထားရပြီး တခြားသော အနုပညာအလုပ်များကိုလည်း မလုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်း၏ကျန်းမာရေးအခြေအ နေကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ ကြန့်ကြာမှုများမဖြစ်လာစေရန်အတွက် နုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ‘အောင်ဆန်း’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးနိုင်ရန်အတွက် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန် ကြီးဦးဆောင်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီကို ပြည်ထောင် စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများအပါအဝင် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင်ဝိုင်း၊ ဦးဇာဂနာ၊ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး အစရှိသူတို့ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ‘အောင်ဆန်း’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် နှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် ပြသနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
'ဂီတသက်တမ်း နှစ် ၂ဝ ပြည့်ချိန် နောက် ၆ နှစ်အကြာမှာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်း အပုဒ် ၁ဝဝ ရှိချင်?
မြန်မာစာရေးဆရာကလပ် ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် အမျိုးသားဇာတ်ရုံ၌ ပြုလုပ
အတက်ရောဂါ ရှိသူတစ်ဦး ဦးပိန်တံတားပေါ်မှ ရေထဲပြုတ်ကျ သေဆုံး
နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်း မှန်ကန်စွာ ထွက်ပေါ်ရေး အခြေခံ အ??